काठमाण्डौ । हामी सबै सुनौलो भविष्यको सपना बुन्छौँ अनि पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास र मेहनत पनि गर्छौं। तर जीवनमा अन्य धेरै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर आय सीमित हुन्छ। सुनौलो भविष्यको सपना पूरा हुने वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो आम्दानीअनुसार वित्तीय योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ। आज हामी यहाँ तपाइँहरुलाई सीमित...
कोरोनाबाट मर्ने बढेपछि शव व्यवस्थापनमा समस्या, पुरानो चिहान खोतलेर नयाँ शव गाड्दै
काठमाण्डौ । ब्राजिलको अवस्था कोरोनाभाइरसको कहरका कारण दिनानुुदिन खस्किदै गइरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण र यसबाट हुुने मृत्युुको सूचिमा ब्राजिल विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यो सूचिको पहिलो स्थानमा अमेरिका रहेको छ । ब्राजिलको प्रमुुख सहर साओ पाउलोमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युु हुुनेको संख्या यति बढेको छ कि त्यहाँ शव गाड्नका...
काठमाण्डौ । जब आफूसँग पैसाको अभाव हुुन्छ, अर्थात नगदको समस्या उत्पन्न हुुन्छ, तब यस्तो समयमा क्रेडिट कार्डले अहम भूमिका खेल्ने गर्दछ । तथापि क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेबापत यसका प्रयोगकर्ताले उच्च ब्याजदर पनि तिर्नुु पर्दछ । संकटको बेलामा क्रेडिट कार्ड सबैभन्दा भरपर्दाे र विश्वासिलो साथी साबित हुुने गर्दछ । तर, यदि यसको सही प्रयोग गरिएन...
जुन २१ को सूर्यग्रहणपछि कोरोना महामारी अन्त्य !
काठमाण्डौ। भारतका एक वैज्ञानिकले यही जुुन २१ मा लाग्ने सूर्यग्रहणपछि कोरोनाभाइरस महामारी अन्त्य हुुने दाबी गरेका छन्। भारतको चेन्नाईका वैज्ञानिकले सूर्य ग्रहण र कोरोनाभाइरसबीच सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। भारतीय सञ्चार दैनिक जागरणमा प्रकाशित समाचारअनुसार न्युुक्लियर र अर्थ वैज्ञानिक डा केएल सुुन्दर कृष्णाले...
थाईल्यान्डमा दुईजना रेष्टुराँ सञ्चालकलाई जनही १,१४६ वर्ष जेलसजाय
थाईल्यान्डको एउटा अदालतले मानिसहरूलाई ठगेको आरोपमा दुईजना रेष्टुराँ सञ्चालकलाई जनही १,१४६ वर्ष जेलसजाय सुनाएको छ। गत वर्ष लाएमगेट सीफूड रेष्टुराँले अनलाइनमार्फत्‌ पहिल्यै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था शुरू गर्‍यो। थाईल्यान्डको पीबीसी च्यानलका अनुसार बीस हजार जति मानिसले पाँच करोड थाई भाट बराबरको भौचर खरिद गरे। तर पछि कम्पनीले...
बन्दैछ यस्तो कपडा, जसमा टच हुनासाथ कोरोनाभाइरस मर्ने दाबी
काठमाण्डौ। कोरोनाभाइरसबाट बच्न भारतको एक कम्पनीले एन्टीभाइरस कपडा बनाउने घोषणा गरेको छ। भारतको अरबिन्द लिमिटेडले स्विस टेक्सटाइल इनोभेसन फर्म ह्याक म्याटेरियल एजीसँग सहकार्य गरेर कोरोनाबाट बचाउने कपडा बनाउन लागेको जनाएको छ। कम्पनीले इन्टेलिक फ्याब्रिक्स ब्रान्डका रुपमा पहिलो पटक भारतमा एन्टीभाइरस टेक्सटाइल टेक्नोलोजी प्रयोग...
८ दिनसम्म कोरोना संक्रमिको लाश शौचालयमा !
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिएको भारतको महाराष्ट्र राज्यको एक अस्पतालबाट जुुन २ गतेदेखि हराइरहेको लाश ८ दिनपछि शौचालयमा भेटिएको छ । यो घटना महाराष्ट्र राज्यको जलगाव सिविल अस्पतालको भएको भारतिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अस्पतालका अनुुसार कोरोना परीक्षणपछि संक्रमित देखिएकी एक महिलालाई जुुन १ गते अस्पताल भर्ना...
चीनद्वारा सालकका अंगहरुलाई औषधिको सूचिबाट हटाउने निर्णय
काठमाण्डौ । जोखिमको सूूचिमा रहेका जनावरहरुको कानुुनी सुुरक्षा बढाएसँगै चीनले अन्ततः वर्षौदेखि प्रयोग भइरहेको सालकको अंगहरुलाई परम्परागत आधिकारिक औषधिको सूूचिबाट हटाएको छ। सालक विश्वमै सबैभन्दा धेरै तस्करी हुुने स्तनधारी जिव हो । केही वैज्ञानिक र अनुुसन्धानकर्ताहरुले चीनको वुुहानमा रहेको जंगली जनावरको मासुु किनबेच हुुने...
के पुनरकर्जाले मात्र थलिएका व्यवसाय उठ्लान् त ?
-दीपक न्यौपाने नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई सम्बद्र्धन गर्न र न्यून लागतमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलार्ई विशेष गरी साधारण पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा, निर्यात पुनरकर्जा, साना तथा मझौला उद्योगमा पुनरकर्जा गरी चार प्रकारका पुनरकजा सुविधा उपलब्ध गराउने...
काठमाण्डौ । भारतमा टीकटक स्टारको रुपमा चिनिने भारतीय जनता पार्टीकी एक नेतृले एक कर्मचारीलाई चप्पलले रामधुलाई गरिरहेको भिडियो भाइरल भएको छ । यो भिडियोमा भारतीय जनता पार्टीकी नेता सोनाली फोगाटले हिसारमा मार्केट कमिटीका एक सेक्रेटरीलाई यसरी रामधुलाई गरेकी हुन् । त्यहाँको खाद्यान्न बजारमै सोनालीले आफूमाथि गलत शब्द प्रयोग गरेको,...
विश्वमा नेपालको हर्बल प्रडक्ट नम्बर वान बन्छ, यसरी गरौं प्रवद्र्धन
-डा. देवराज क्षेत्री कोविड-१९ बाट विश्व आक्रान्त बनिरहेको यो विषम परिस्थितिमा अर्को ठूलो समस्या आउने देखिन्छ, त्यो हो बेरोजगारी। लाखौं नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु विदेशबाट नेपाल फर्कदै हुनुहुन्छ। तसर्थ नेपालमा जनसंख्याको चाप बढ्ने देखिन्छ। नेपाल फर्कने नेपालीहरु अब के गर्नेछन् ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। साथै नेपालबाट जुन...
काठमाण्डौ । माइक्रोसफ्टले आफ्नो एमएसएन वेभसाइटमा अनुुबन्ध दर्जनौ पत्रकारहरुलाई स्वचालित रोबोट प्रणालीद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । अमेरिकी र बेलायतका मिडिया रिपोर्टका अनुुसार यो स्वचालित प्रणालीले समाचारहरु स्वयम् चयन गर्नेछ । समाचार संस्थाबाट हुुने न्युुज क्युुरेटिङ र एमएसएन साइटका लागि हेडलाइन र तस्बिरहरु अहिलेसम्म...
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरस बारे विभिन्न खाले अफवाहहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा यत्रतत्र हेर्न र सुुुन्न पाइन्छ । बिबिसीले त्यस्ता भम्रपूर्ण दाबीहरुको जाँच गरेको थियो, जुुन पछिल्लो साता सामाजिक सञ्जालहरुमा सबैभन्दा धेरै सेयर गरिएका थिए । यसमा गाजा सेवन गरे कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने एउटा दाबी पनि समावेश थियो । हजारौ मानिसहरुले सामाजिक...
काठमाण्डौ । जब भारतमा लकडाउनबीच रक्सी पसलहरु खुले तब मानिसहरुको भीडभाड नै लाग्यो। लाग्थ्यो कि रक्सीका सौखिनहरु सास रोकेर वा भनौँ मन थामेर यो क्षणको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। लकडाउन खोल्नासाथ रक्सी पसलबाहिर न त कोरोनाको डर न सामाजिक दूरीकै पर्वाह। उनीहरुको एउटै ध्याउन्न थियो कतिखेर आफ्नो घाँटी भिजाउन पाइएला। भारतमा मात्रै होइन...
तामझामका साथ लकडाउनमा बिहे, बेहुला–बेहुली क्वारेन्टाइनमा पुगे
काठमाण्डौ । पाकिस्तानमा भएको एउटा विवाह फरक कारणले चर्चाको विषय बनिरहेको छ। त्यहाँ बेहुली लिन जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुुग्दा बेहुलालाई गिरफ्तारी गरेसँगै क्वारेन्टिन पठाइएको छ। प्रहरीले विवाह समारोह स्थलमा रेड मारेर अन्य १२ जना व्यक्तिसमेत गिरफ्तार गर्यो। पाकिस्तानको फैसलाबादमा लकडाउनका बीच विवाह गर्दा बेहुलालाई निकै भारी...